Youtube to MP3 Converter (२०२०) - विन्डोज, एन्ड्रोइड र म्याक - मनोरञ्जन
यूट्यूब इन्टरनेटमा सबैभन्दा ठूलो प्लेटफर्महरू मध्ये एक हो, जहाँ तपाईं संगीत पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै संख्यामा कलाकारहरू छन् जसले यो सेवा प्रयोग गर्छन्। यो भिडियो प्लेटफर्म पहुँच गर्न सबैभन्दा ठूलो निःशुल्क हो।
संगीत भिडियोहरू आजका दिनहरूमा सफल कलाकारहरूको लागि दैनिक आवश्यकता भएको छ। व्यक्तिहरू उनीहरूको मनोरन्जनका लागि सामग्री अनलाइन हेर्ने आशा गर्छन्। धेरै लोकप्रिय कलाकारहरू यसको निःशुल्क प्रमोशनको विधिको रूपमा प्रयोग गर्छन्। यस गाईडले कुनै पनि युट्युब भिडियोलाई एमपी format प्रारूपमा रूपान्तरण गर्ने कुरामा एक नजर राख्नेछ। तपाईंको प्रयोगको लागि त्यहाँ धेरै विधिहरू उपलब्ध छन्। यी सबै तपाइँका सबै उपकरणहरूमा १००% काम गर्दछ।
युट्यूबलाई एमपी to मा रूपान्तरण कसरी गर्ने?
त्यहाँ धेरै अनलाइन वेबसाइटहरू र अनुप्रयोगहरू छन् जुन यो सेवा प्रदान गर्दछ। यस गाईडमा हामी ती सबैलाई हाम्रो पाठकहरूको लागि कभर गर्ने प्रयास गर्नेछौं। आवश्यक चरणहरू प्रत्येक वेबसाइट र अनुप्रयोगको लागि समान हुन्। यहाँ छ कि तपाईं कुनै पनि उपकरणमा अडियो को रूप मा यूट्यूब सामग्री डाउनलोड गर्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
यस विधिमा, हामी वेबसाइटहरूलाई हेर्छौं जसले हामीलाई रूपान्तरण सुरू गर्न सक्षम गर्दछ। यस ट्यूटोरियल को लागी, हामी YTMP3 वेबसाइट प्रयोग गर्दैछौं। यो धेरै लोकप्रिय छ र हरेक भिडियोको साथ राम्रोसँग काम गर्दछ। यहाँ सजिलो प्रयोगको लागि तपाईले अनुसरण गर्न सक्ने चरणहरू छन्।
अर्को चरण भनेको youtube मा जानुहोस् र तपाईंले अडियोमा रूपान्तरण गर्न चाहानुभएको भिडियो फेला पार्नु हो। तपाईं वेबसाईटबाट लिंक प्रतिलिपि टाँस्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं आफ्नो ब्राउजरमा वेबसाइट भ्रमण गरेर सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। प्रयोगकर्ताहरूले यस लिंकमा क्लिक गर्न सक्दछन् (https://ytmp3.cc/)। यो एक अनावश्यक बाधा बिना एक साधारण वेबसाइट हो। यूट्यूब वेबसाइटबाट लिंकलाई यहाँ प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस्। रूपान्तरण बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसो भए तपाई राम्रो हुनुहुन्छ।
एक पटक रूपान्तरण प्रक्रिया हुन्छ, तपाईं आउटपुट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रयोगकर्ताहरूको लागि उत्तम छ जो आफ्नो संगीत बचत सुरू गर्न चाहन्छन्। फाइल स्वत: डाउनलोड गर्न सुरू हुनेछ।
Voila! तपाईं आफ्नो गीत धेरै छिटो डाउनलोड गर्नका लागि यो विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको डेस्कटप र ल्यापटपहरूमा वेबसाइट विधि सिफारिस गर्दछौं। यो अत्यधिक कुशल छ र धेरै कम समय लिन्छ।
यस विधिमा, हामी एक अनुप्रयोगमा हेर्छौं जुन तपाईंलाई mp3 भिडियो फाईलहरूको रूपमा यूट्यूब भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्षम गर्दछ। प्रविधि सबै एन्ड्रोइड उपकरणहरूको लागि काम गर्दछ। हाम्रा पाठकहरूको लागि सेवा अनुसरण गर्न यो सजिलो छ। यस सेक्सनमा, हामी तपाईंको सजिलो पहुँचको लागि ट्यूबमेट प्रयोग गर्ने छौं।
प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको स्मार्टफोन उपकरणहरूमा ट्यूबमेट सेवा डाउनलोड गरेर सुरु गर्नुपर्नेछ। यो आधिकारिक गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध छैन। जो कोहीले कुनै पनि समस्या बिना कुनै सेवाको मजा लिन सक्दछ। तपाईंले निम्न लिंक भ्रमण गर्नुपर्नेछ - https://tubemate.en.uptodown.com/android । अज्ञात स्रोतहरूबाट स्थापना सक्षम गरेर APK फाइल स्थापना गर्नुहोस्।
एकचोटि डाउनलोड र स्थापना पूरा भएपछि, प्रयोगकर्ताहरू अनुप्रयोग भ्रमण गरेर सुरू गर्न सक्दछन्। यसले सबै प्रमुख अनलाइन प्लेटफर्महरूबाट डाउनलोड समर्थन गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले यूट्यूब प्लेटफर्म चयन गर्नुपर्नेछ र तिनीहरूको भिडियो खोजी गर्नुपर्नेछ। ट्यूबमेटले यसको अनुप्रयोग भित्र यूट्यूब मोबाइल वेबसाइट चलाउँछ।
प्रयोगकर्ताहरूले अनुप्रयोगमा कुनै पनि भिडियोमा गएर सुरू गर्न सक्दछन्। यो सामग्री हेर्न र सुन्न मन पराउने प्रयोगकर्ताहरूको लागि उत्तम छ। एक पटक तपाईंले वेबसाइटमा संगीत भिडियोहरू हेर्न सुरू गर्नुभयो, डाउनलोड गर्न सजिलो हुन सक्छ। रातो डाउनलोड बटन भिडियोमा देखा पर्नेछ। विकल्पहरू हेर्नका लागि तपाईं यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
ट्यूबमेटले प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै फरक ढाँचामा सामग्री डाउनलोड गर्न सक्षम गर्दछ। तपाइँ तपाइँको सुविधा को लागी Mp3 ढाँचा छान्न सक्नुहुन्छ।
हामी आशा गर्दछौं कि यो विधि तपाईंको अडियो आवश्यकताहरूको लागि निर्दोष रूपमा काम गर्दछ। आज यो प्रयास गर्नुहोस्। हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाईंको डाउनलोडसँग परिणामहरू कस्तो देखिन्छन्।
हाम्रो शीर्ष छनौटहरू:
अब तपाईलाई थाहा छ यु ट्यूबलाई एमपी to मा रूपान्तरण कसरी गर्ने। यो समय हाम्रो विकल्पहरू अन्वेषण गर्ने र विविधता ल्याउने हो। यसले तपाईलाई ब्याकअप विकल्पहरू लिन सहयोग गर्दछ जुन हामीले पहिले नै उल्लेख गरेका छौं। वेबसाइटहरूको टनले यो समाधान प्रस्ताव गर्दछ। हामी तपाईको पहुँच को सहजता को लागी धेरै को कभर आशा राख्दछौं। हामी सबैलाई उपलब्ध छ कि छैन हेरौं।
यो एक अनलाइन प्लेटफर्म हो जुन तपाईंको रूपान्तरण आवश्यकताहरूमा सहयोगी छ। यो YTMP3 वेबसाइट जस्तै छ। प्रयोगकर्ताहरूले सजिलैसँग पोडियममा उनीहरूको मनपर्ने सामग्री डाउनलोड गर्न सुरू गर्न सक्दछन्। चरणहरू माथि दिएको अनुसार उस्तै रहन्छन्। लिंकलाई पेस्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि कन्भर्टमा क्लिक गर्नुहोस्।
प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस सबै को उपयोग को लागी एकदम सरल छ। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईंले आजैलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् र उत्तम परिणामहरू पाउनुहोस्। यो प्लेटफर्ममा तपाइँसँग तपाइँको मनपर्ने संगीत र कार्यक्रमहरू हुन सक्छ। यो एक सरल तर प्रभावशाली प्रक्रिया हो जसको लागि तपाईंलाई माथिको दिशा निर्देशनहरू पालना गर्न आवश्यक पर्दछ।
ओन्टिभा एक उपयोगी वेबसाइट हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सबै युट्यूब समाधानहरूको साथ मद्दत गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले साधारण क्लिकको साथ भिडियोहरू रूपान्तरण गर्न सक्दछन्। हामी वेबसाइटमा उपलब्ध शानदार यूजर इन्टरफेसको पूर्ण आनन्द लिन्छौं। यो पातलो र अनुपम छ। प्लेटफर्म अत्यधिक कुशल छ र धेरै प्रयासको आवश्यकता पर्दैन।
प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै फरक गुणहरूमा डाउनलोड गर्न सक्षम गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले मिनेटका गुणहरू जस्तै बिटरेटहरू र अन्य सानो विवरणहरू चयन गर्न सक्दछन्।प्लेटफर्मले तपाईंलाई भिडियो डाउनलोड विकल्प प्रयोग गर्न पनि मद्दत गर्दछ। यो सबैको लागि धेरै राम्रो काम गर्दछ। सुविधाहरूको सूची फोरममा पनि प्रभावशाली छ।
EasyMP3Converter वेबसाइट अत्यधिक कुशल छ जब यो सामग्रीको कुरा आउँछ। वेबसाइट यसको नाममा सत्य छ। उत्तम परिणामका लागि प्रयोगकर्ताहरूले यो प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सक्दछन्। हामी हाम्रा सबै पाठकहरूलाई यस प्लेटफर्ममा जानको लागि सिफारिश गर्दछौं। तपाईं द्रुत द्रुत गतिमा उच्च-गुणवत्ता डाउनलोडहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
रूपान्तरण समय सबैको लागि अपेक्षाकृत कम हुन्छ। प्रयोगकर्ताहरूले यस वेबसाइट मार्फत बिटरेट र गुणवत्ता पनि चयन गर्न सक्दछन्।यसले तपाईंलाई भविष्यको प्रयोगको लागि अनुकूलनको केही स्वतन्त्रता दिन्छ। डाउनलोडहरू कुनै समस्या बिना तुरून्तै सुरु हुन्छ।
Savefrom सबै youtube डाउनलोड आवश्यकताहरु को लागी वेबसाइट छ। यो प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध भिडियो डाउनलोड सुविधाहरूको लागि परिचित छ। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले यस मार्गनिर्देशनलाई सजिलो प्रयोगको लागि अनुसरण गर्नुहोस्।
जो कोहीले वेबसाइट भ्रमण गर्न र आफ्नो मनपर्ने भिडियोहरू अडियो प्रारूपमा डाउनलोड गर्न सक्दछन्। यो मुख्यतया भिडियो डाउनलोडका लागि उपयुक्त छ तर अडियो सामग्रीको लागि पनि काम गर्न सक्दछ।
यूट्यूब भिडियोहरूलाई एमपी to फाईलमा रूपान्तरण गर्न एकदम सजिलो छ। हामी आशा गर्दछौं कि हाम्रो मार्गनिर्देशनले हामीले अनुसरण गर्न आवश्यक पर्ने चरणहरूमा केही प्रकाश राख्न सक्षम भयो। हामीले हाम्रो शीर्ष पिकहरू पनि थपेका छौं। यसले तपाईंलाई प्लेटफर्ममा सजिलैसँग कुनै पनि सामग्री रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ।
YouTube प्रीमियम छात्र छूट
विद्यार्थीहरूको छुटका लागि माइक्रोसफ्ट अफिस खरीद गर्नुहोस्
नेटफ्लिक्ससँग नि: शुल्क परीक्षण छ
नेटफ्लिक्स १ महिना निःशुल्क परीक्षण
नि: शुल्क सुनको xbox प्रत्यक्ष कोड
सबै नयाँ चलचित्रहरू नि: शुल्कका लागि अनलाइन हेर्नुहोस्